Baaqa H/Jeclada reer Ceerigaabo.
Wednesday June 06, 2018 - 11:26:28 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
1) Shirkii dhalay goof kadhacay, waxa nooga soo baxay qodobadan hoos ku qaran:
In dagaal ooge ina
Xaaji Nuur aanu ahayn Moyarka magaalada ceerigaabo,
laga bilaabo' 4th June 2018, kadib markuu Cadaystay inuu yahay hogaamiye kooxeed dagaal, kuna biiray kooxdii beeshiisa ahayd ee ka falaagawdey ciidamada qaranka Somaliland, isaga iyo ragii lasocday oo ay ka mid ahaayeen taliya ku xigeenka saldhiga police ka Ceerigabo, madaxa hayadaha samafalka gobolka iyo madax dhaqameedookii.
Iyadoo ay horay ugu biireen kooxda falaagada ee uu hogaaminayo sarkaalka lagu magcaabo Caare, cuqaal iyo xilxdhibaano ay isku hayb yihiin kooxdan reer Goof, Isla markaana xidhiidh toosa la leh maamul goboleedka Majeerteeniya, dhowaana Garoowe tageen si ay saanad dagaal iyo saadba uga soo helaan.
2) In dagaal ooge ina Xaaji Nuur uu iyo kooxdiisani, dabada kawaday Shaqaaqadii loo taagwayey ee mudada dheer kasocotey degaanka ceelafweyn, ee dhimashada badan iyo dhaawacaba keentay ee labadan reer ee ehelka ka dhexsocotey.
3) Shirka goof kadhacay wuxu fashiliyey in ladoonayo in lafashilyo xukuumada Somaliland, bari ilaa galbeedna colaada lagaadhsiiyo, si ay Somaliland ugu noqoto' 1993- 1994, iyo fekerkii fadaraalka, taasna waxa marag u ah magaca meesha lagaga dhawaaqay ee Garaxajis bari.
4) Hadaba waxan ugu baaqaynaa dhamaan umadda reer Somaliland; sedexda gole qaran iyo wixii danaynaya badbaada qaranka in deg deg arintan looga hortago intaanay madaxtooyada iyo golayaashana idiinku iman.
Anagu hadaanu nahay H/Jeclo bari
Waxanu kale umadda reer Somaliland u sheegynaan waxanu nahay beesha ugu degaan balaadhan gobolka sanaag, 70% ugu yaraan ayaan degnaa.
Dib u xorayntii dalka iyo Dib u heshiisiintba tacab badan baa naga galay.
U dulqaadanmayno waxan ay ka wadaan gobolka Sanaag kooxdan yar ee fidmawadayaalka ah ee fadaraalka iyo Garoowe laga soo abuubulayo.
Hormuudka H/jeclada Ceerigabo